Tongasoa eto Egypta ny BAREA de MADAGASCAR – Gasy Egypte
« Gasy ihany, Gasy hatrany… Miara-mirona BAREA CAN2019 … Omaly hariva faha 18 ny volana jiona tokony ho tamin’ny 9 ora alina no nigadona teto Egypta, teto amin’ny seranam-piara-manidina Caire ny ekipam-pirenena Malagasy BAREA hiatrika ny lalao ho fiadiana izay ho tompon-dakan’I Afrika na fantatry ny maro amin’ny hoe CAN.”
Ny BUS mitondra ny lokon’ny Madagasikara izay tonga nitsena ny BAREA (De gauche a droite ; Willy, Alice, Zo, Malagasy eto Egypta)
Tena manan-danja sy zava-dehibe izao ho antsika Malagasy satria tokoa dia voalohany eo amin’ny tantara izany ekipam-pirenena Malagasy izany no hiatrika lalao goavana toy ny CAN. Tsy nanao ambanin-javatra ny fahatongavan’ireto mpilalao baolina kitra Malagasy ireto ny mpiray tanindrazana monina aty an-toerana fa tonga nitsena sy nanontrona izany fahatongavan’izy ireo izany. Tena hita sy tsapa ny maha-Malagasy, ny fihavanana, ary indrindra fa ny firaisan-kina.
I Voavy Paulin manao signature autographe
Nafana ny “ambiance” satria efa niandry fatratra ny ankamaroan’ireo Malagasy eto Egypta ny amin’izao fitsenana ny BAREA izao. Ary tena nampihetsi-po ny mpilalao tokoa ny fanohanana sy ny fihetsika nasehon’ny Malagasy eto Egypta. Mbola hitohy sy hihamafy hatrany izao fanohanana ny ekipantsika izao hatramin’ny faran’ny CAN.
Raha vantany vao tonga ny BAREA dia nihazo avy hatrany an’ny Alexandrie (renivohitry Egypta teo aloha raha ny tantara, any avaratry Caire) satria any no hiatrika ny lalao voalohany ny Asabotsy 22 jiona 2019; hifanandrina amin’ny Guinée. Any amin’ny hotel raitra dia raitra kintana efatra izy ireo no mivahiny : “Hilton Alexandria King’s Ranch”. Isaoranay etoana ny firenena mpampianatrano sy ny amin’ny fandraisana ny ekipanay.
Tianay I Madagasikara, tohananay hatramin’ny farany ny ekipanay BAREA, hiezaka izahay ho eo foana mandritra ny lalao rehetra, ary afaka mirehareha izahay satria efa zava-dehibe loatra izany tafiakatra CAN izany… “Gasy ihany dia Gasy hatrany, Miara-mirona BAREA CAN 2019”
Activites et Divers, Ireo vahiny Tonga, Les Chroniques de Mihaja, Les incontournables, Politique, Spécial CAN Egypt 2019, Vaovao